Ambatofinandrahana: Anaovan’ny dahalo fangalam-piery ny zandary
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Ambatofinandrahana: Anaovan’ny dahalo fangalam-piery ny zandary
Taorian’ny fanafihana tsy ankiato nandritra ny telo volana mahery nataon’ny dahalo tao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana dia tonga any amin’ity toerana ity ny zandary avy aty Antananarivo manao hetsika fampandrian-tany. Manampy azy ireo ny zandary ao Ambositra. Tsy nety nanome tarehimarika mahakasika ny isan’ny zandary nanao ity hetsika ity mpampita vaovao taty aminay.
Ny loharanom-baovao avy any amin’ny ilany atsimo ao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana dia ny ao amin’ny kaominina Fenoarivo no nahalalana fa efa tonga any amin’ity toerana ity ireo zandary hampandry tany ireo. Manao savahao hoy hatrany ny loharanom-baovao. Tsy ny ao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana ihany nefa no misy izany hetsika izany fa ny ao amin’ny distrikan’i Manandriana koa. Tsy misy hita nefa ireo dahalo fa niery indray. Malaza fa andian-dahalo hatrany amin’ny 80 lahy no miaradia manafika. Nankaiza izy ireo ary niery aiza ?
Eo anatrehan’izany dia toa ny tsy nisy ny asan-dahalo izay namely mafy ity faritra ity. Mangina ny toerana rehetra, hoy ny loharanom-baovao hatrany. Fahanginana mampieritreritra nefa na izany aza satria fantatra fa mandalo ihany.
Mba nisy filaminana ny ao Ambatofinandrahana renivohitra tao anatin’ny herinandro teo ho eo. Marihina fa tsy afaka nanohitra intsony ny fokonolona noho ny basy marovava nampiasan’ny dahalo ireto, niampy bala tsy mety lany, hoy ireo voatafika.
Manahy mafy ny aorian’ny fanaovana hetsika izao nefa ny mponina any an-toerana. Matetika mantsy rehefa vita ny raharaha toa izao dia valifaty tsy misy toa izany indray no ataon’ireo dahalo.
Ho an’ny mponina any an-toerana dia ny fanovana ny komandin’ny kaompanian’ny zandary ao Ambatofinandrahana aloha no vahaolana maika. Maro ny resaka mahakasika ity zandary ity sy ny mpiara-miasa aminy vitsivitsy. Haharitra hafiriana izao hetsika ho an’ny fandriam-pahalemana any Ambatofinandrahana izao? Inona no tetika ho tohin’izao ka tsy hisian’ny valifaty hataon’ny dahalo. Milaza ny mponina any an-toerana fa ny fanjakana mihitsy no manao dahalo amin’izao fotoana izao noho ny fanondranana omby ataon’izy ireo amin’ny Sinoa.
Depiote: 4X4 an’i Filoha sa an’i Pm no hozaraina indray ?
Mandeha dia mandeha ny resaka amin’izao fotoana izao fa misy fiarakodia 4X4 hozaraina amin’ireo solombavambahoaka. Milaza ny loharanom-baovao voalohany fa miisa 164 ireo tonga ao Toamasina ao. Manambara indray ny loharanom-baovao faharoa fa 104 ihany no isan’izy ireo satria ny sasany efa nisy nahazo. Mbola milaza ny loharanom-baovao fahatelo fa efa eo ampanamboarana ny taratasy hahazoana izany ny fanjakana amin’izao fotoana izao. Ireo solombavambahoaka nefa mody tsy mahafantatra na inona na inona fa ireo olona miasa akaiky azy no mitantara ny fisian’ity raharaha ity. Matetika voafitaka koa izy ireo ka izao mikombom-bava izao aloha na dia mahafantatra izany. Raha namoaka lahatsoratra mahakasika ireo fiara 4X4 izahay ny herinandro lasa teo dia nanambara fa depiote vitsivitsy ihany no nahazo izany. Ny avy amin’ny “plate-forme” sy ny HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara), izay miisa eo amin’ny 10 eo. Amin’izao fotoana izao dia izy rehetra no homena indray satria maro no tsy faly amin’izany.
Mandeha dia mandeha ny resaka fa hisy ny fanesorana ny praiminisitra eo amin’ny toerany sy ny governemanta tarihiny. Amin’ny alalan’ny fitsipaham-pitokisana no hanaovana izany raha ny resaka mandeha ka ny solombavambahoaka no hanao izany araka ny lalàna. Toa avy hatrany dia nihetsika ny tao Mahazoarivo nanohitra izany ka nampiantso ny depiote teny an-dapa. Maro no tonga tamin’izany izy ireo nitafa tamin’ny praiminisitra. Tsy mijanona izany fihaonana izany ka omaly talata faha 16 may 2017 tolakandro dia mbola nifanao fotoana tamin’ny depiote avy any Mahajanga indray ny tenany.
Ankilany indray, mandeha ny resaka fa ingahy Hery Rajaonarimampianina mihitsy no mampanao izay fanesorana ny praiminisitra izay raha ny loharanom-baovao avy any an-dapa. Ny filazan’ilay tale ny lalàna Idealison ao Iavoloha tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray tamin’ny alahady 14 may 2017 lasa teo dia manamafy ny fisian’izany satria niampanga ny tsy fandehanan’ny raharaha ao amin’ny mpikambana ao amin’ny governemanta intsony izy. Izany no ilazana fa misy ny mpanongana ary misy ny miaro tena amin’ity raharaha ity. Raha toa ka izany no dinihina dia hisy indray ny fanonganana mpitondra. Iza ary no hizara io 4X4 io ho an’ireo depiote ireo? Ingahy Hery Rajaonarimampianina sa ny praiminisitra Solonandrasana Olivier? Ho hitantsika ny tohiny. Ny fahazoana izany iray taona alohan’ny fahataperan’ny fotoam-pitondrana dia midika fa zava-dehibe no anton’ny fanomezana.